EURO 2020: Xulka talyaaniga oo ka badiyay kan Austria, horayna u gudbay : Calanka.com
EURO 2020: Xulka talyaaniga oo ka badiyay kan Austria, horayna u gudbay
Waxaa goor soo idlaaday kulan ka tirsan wareegga 16-ka tartanka qarammada qaaradda Yurub kaasoo dhex maray xulalka Italy iyo Austria oo garoonka ku hardamay 120 daqiiqo.
Ciyaarta qaybteedii hore ayaa ku dhammaatay barbarro 0-0, balse xulka Taliyaaniga ayaa helay fursado qaali ah kuwaasoo nasiib darro ay beerdareeyeen xiddigaha Azzuri.
Markii dib la isugu soo laabtay waxaa gool markii dambe la diiday dhaliyay Marko Arnautovic, hase ahaatee goolkaas dhashay daqiiqaddii 66-aad ee ciyaarta ayaa waaxda garsoorku waxay ku tilmaameen dadab-dhaaf sidaas darteedna waa la tirsay goolkii loo xarriiqay Austria.
90-kii daqiiqo ee caadiga ahaa ayaa lagu kala nastay barbarro goolal la’aan ah, waxaana loo baahday in lagu kala baxo 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo min 15 daqiiqo lee qaybin doono.
Qaybtii hore ee waqtiga dheeraadka ahaa ayaa la gudo galay iyadoo Taliyaaniga uu markan middida galka kala baxay, waxaana daqiiqaddii 95-aad shabaqa gaaray Federico Chiesa oo hoggaanka u dhiibay Azzuri isagoo ciyaarta ka dhigay 1-0.
Waxaa qaybta nasiinnada ee waqtiga dheeriga ah lagu sigtay in lagu aado iyadoo Taliyaaniga uu hoggaanka ku hayo goolkii Chiesa, balse intaan nasiinnada la aadin, waxaa goolka labaad xulka Macallin Roberto Mancini u dhaliyay xiddiga naadiga Atalanta ee Mettia Pessina daqiiqaddii 105-aad ee ciyaarta.
Austrian-ka oo tabar meel dheer ah iska raadinaya ayaa gool qura soo celiyay daqiiqaddii 114-ee ciyaarta oo ah qaybtii labaad ee waqtiga dheeriga ah kaddib markii uu shabaqa dul dhigay gool xiddiga baddelka kusoo galay ee Sasa Kalajdzic, balse taas kagama aysan filnaan inay soo barbarreeyaan goolashii Taliyaaniga.
Ugu dambeyn xulka qaranka Taliyaaniga ayaa u gudbay wareegga rubac-dhammaadka tartanka Euro 2020 waxaana uu sugi doonaa midkood xulalka Belgium iyo Portugal oo habeen dambe wada ciyaari doona.